किन प्रयोग गर्दैछन् वेश्यालयका यौनकर्मीहरुले रेनकोट ? - Malayakhabar
होम पेज यौन र जीवन किन प्रयोग गर्दैछन् वेश्यालयका यौनकर्मीहरुले रेनकोट ?
किन प्रयोग गर्दैछन् वेश्यालयका यौनकर्मीहरुले रेनकोट ?
काठमाडौं := कोरोना भाइरसका कारण विश्वका सबैजसो पेशा व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । यीमध्ये यौन पेशाचाहिँ सबैभन्दा धेरै संकटमा परेको पेशा हो । कोरोना भाइरस महामारी लम्बिँदै जाँदा ल्याटिन अमेरिकी देश बोलिभियाका यौनकर्मीहरु सुरक्षाका विशेष उपाय अपनाउँदै काममा फर्किँदै छन्।
[ photo source : google ]
एक यौनकर्मी महिलाका अनुसार उनीहरुका ग्राहक निकै बुझक्की छन् । उनीहरु फेस मास्क, अनुहार छोप्ने प्लास्टिकको पर्दा, पञ्जा र रेनकोट लगाएर यौनक्रियामा संलग्न हुन्छन् । बोलिभियामा अहिलेसम्म ५० हजारलाई कोरोना संक्रमण भैसकेको छ भने १९ सय जनाको मृत्यु भैसकेको छ । गत हप्तामात्रै त्यहाँका अन्तरिम राष्ट्रपतिलाई समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। SOURCE : BBC
अघिल्लो लेख इजरायली श्रम बजार नेपालीका लागि खुला–रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
पछिल्लो लेख नयाँ मुख्यसचिवमा शंकरदास बैरागी, युवराज खतिवडालाई अमेरिका र लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत बनाउने सरकारको निर्णय
इन्डोनेशियामा भूकम्पले ७ जनाको ज्यान गयो।